C/Kariin X. Guuleed oo soo dhaweeyay dadaallada doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
C/Kariin X. Guuleed oo soo dhaweeyay dadaallada doorashada
Madaxweynihii hore ee Maamulka Galmudug, Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa soo dhaweeyay dadaallada lagu doonayo xal u helidda doorashooyinka dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa soo dhaweeyay shirka hoggaamiyayaasha Soomaalida u socda, wuxuuna ku taliyay in aan la dayicin fursadda maanta la heysto.
“Waxaan xoojinayaa dadaallada xalka loogu raadinaayo doorashadda 2021. Waa muhiim in aan la dayicin fursada maanta taalla Teendhada Afisyooni.” Ayuu yiri Guuleed.
Madaxweynihii hore ee Galmudug, ayaa sheegay in xilligaan Soomaaliya u baahan tahay, qabashada doorasho xasilloon oo la isala oggol yahay iyo xukunka oo nabad loogu tartamo, nabad la isugu wareejiyo, wadajirna loogu adeeggo dalka iyo dadka.
“Madaxweynaha muddo xilleedku ka dhammaday iyo Dowlad Gobolleedyadu waa iney ku dadaalan iney ka miro dhaliyaan wadahadallada socda, fashalka iyo niyad-jabka jirana meesha ka saaran, si loo sii amba qaado Dowlad-dhiska socda iyo dimuqraadiyada”. Ayuu sidoo kale yiri Guuleed.
Wasiirkii hore Ariimaha Gudaha iyo Amniga qaranka Guuleed, ayaa xusay in “Qof walba oo fashiliya dadaalka socda uu magan u noqon doonaa taariikh madoow, isla markaana shacabka ugu suntanaan doonaa dhinaca xun.”
Cabdikariin Xusen Guueed, wuxuu ku baaqay in Madaxdu isku tanaasusho, si dalku uga baxo waxa uu ugu yeeray xayiraadda siyaasadda, midda dhaqaalaha iyo walbahaarka shacabka.